Huawei P40 Lite E: Saddex kamaradood oo qiime jaban | War gadget
Huawei waxay umuuqataa inay kudhacday bandhiga bandhigyada, imaatinka ugu dambeeya waa mid kale oo kamid ah qoyska P40, kiiskan waxaa nalagu soo gudbiyay Huawei P40 Lite E cusub, shirkada Aasiya waxay sifiican ugu dhaqaaqeysaa safafka sare qaar kamid ah badeecooyinka ugu fiican ee suuqa yaal, laakiin halka ay had iyo jeer ku muujiso awooddeeda waxay ku jirtaa safafka dhexe, halkaas oo ay ku siiso alaab "la awoodi karo" oo leh astaamo ay adag tahay in la iswaafajiyo. Waxaan si qoto dheer wax uga ogaan doonnaa Huawei P40 Lite E cusub, ma awoodi doonaa inay bixiso kamarad wanaagsan oo leh qiime ka hooseeya 200 euro? Huawei wuxuu ballan qaadayaa haa.
Waxay leedahay 6,39-inch IPS LCD guddi aan leenahay HD + xal. Dhinaceeda, waxaan haynaa Kirin 810 oo ah heerka wax soo saar oo ay weheliso 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo keyd ah, lagu ballaarin karo microSD illaa 512GB. Qeexitaannada waa la xakameeyey laakiin waxay in ka badan ku filan yihiin saldhigga 180 euro. Indhuhu si dhakhso leh ayey ugu leexdaan gadaasheeda halka aan ku leenahay dareeraha faraha iyo sedex kamaradood oo module ah:
Ugu muhiimsan: 48 Xildhibaan
Xagal ballaadhan: 8 Xildhibaan
Qotada dareeraha: 2 MP
Dhinaca hore iyo iyada oo loo marayo nidaamka 'frecklele' waxaan haysannaa kamarad sawir qaas ah oo 8MP ah. Waxaan ku sii wadaynaa miiska, oo aan ka yarayn 4.000 mAh (10W charge) oo batteri ah oo kordhinaya ismaamul wanaag, EMUI 9.1 oo ku saleysan Android 9 (oo aan lahayn adeegyada Google). Qiimaheeda ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa 199 euro, laakiin shirkadda Huawei ayaa ku daahfurtay dukaankeeda rasmiga ah 179 euro oo ah dalab kumeel gaar ah adoo adeegsanaya nambarka «AP40E» oo ay wadaagaan asxaabta Movilzona.
Shaki la'aan, ballanqaad aad u adag oo ku saabsan kala-soocida shirkadda Huawei taas oo waxa kaliya ee loo aaneyn karo ay tahay la'aanta Adeegyada Google laakiin ... Maxaa laga yiri Xiaomi oo leh ROMS-ka wax ka kooban sanado ka hor? Waxaad ku iibsan kartaa cagaar iyo madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Huawei P40 Lite E: Saddex kamarad oo qiime jaban ku fadhiya